लालबाबुलाई गैरआवासीय नेपालीको आग्रह - Ratopati
लालबाबुलाई गैरआवासीय नेपालीको आग्रह
- | सरगम भट्टराई
लालबाबु पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उठाएका कतिपय विषय मलाई राम्रै लागेका थिए । उनले डीभी तथा पीआरधारी कर्मचारीलाई जागिर अथवा पीआर छाड्न निर्देशन दिएका थिए । यो विषमा उनी धेरै समयसम्म एक्लै लडिरहे । यो कार्यमा मलाई उनीप्रति श्रद्धा जागेको थियो । तर त्यो श्रद्धा अहिले क्रमशः घट्दै गएको छ । तर पनि उनको सरल जीवनशैलीप्रति म प्रभावित छु । यस्तै दृढ इच्छाशक्ति भएका धेरै लालबाबु नेपाल निर्माणका लागि चाहिएका छन् ।
यसै प्रसङ्गमा केही दिनअघि रिपोर्टर्स नेपालको कार्यक्रममा लालबाबुले विदेशी भई विदेशमा मतदान गर्ने नेपालीलाई भू.पू. नेपाली भनेछन् । यति मात्र हैन भू.पू. नेपालीले नेपालका बारेमा चिन्ता लिनु नपर्नेसमेत भनेका छन् । उनको यो भनाइ परदेशमा कर्मथलो बनाएका नेपालीहरुको घोर अपमान हो ।
देशमा धेरै समस्या छन् । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भौगोलिक विकटता, संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती, अशिक्षा र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अभाव जस्ता आम समस्या छन् । यी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको खेदो खनेको मात्र देख्दा उहाँमा सराप्ने बाहेक अरु विज्ञता रहेनछ भन्ने देखिएको छ । किनभने कोही पनि रहरले आफ्नो देश छोड्दैनन् । त्यस्तै विदेशिने वित्तिकै सबै राष्ट्रघाती हुने उहाँको विचार सरासर गलत छ । अनि नेपालमा बस्ने सबै राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने सोच पनि गलत छ । देशमै बसेर देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्नेहरु चाहिँ राष्ट्रवादी हुने अनि विदेशमा पसिना बगाएर केही पैसा कमाउने राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ ।
यसर्थ लालबाबुलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तपार्इंले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्तालाई डीभी, पीआर लिनबाट रोक्न सक्नुभएको छ ? के तपाईंका पार्टीका नेताले आफ्ना छोरा छोरीलाई युरोप अमेरिकाबाट फिर्ता बोलाएका छन् ? किन निजामती सेवा नियमावली परिवर्तन गराउन तपाईँलाई फलामको चिउरा भएको थियो ?
देशमा समस्या सिर्जना गर्ने डी.भी. पी.आर. लिनेहरु होइनन् । उनीहरुले विदेशीको चुनावमा भोट हाल्दा नेपाललाई दुत्कारेर भोट हालेका पनि होइनन्, कसैको डर, प्रलोभन र धम्कीको कारणले भोट हालेका पनि हैनन् । कसैलाई सत्तारोहण गराउनका लागि बन्द हडताल गरेर टायर पनि बालेका छैनन् । कुनै दलको हनुमान बनेर कालोबजारी पनि गरेका छैनन् । बरु देशमा असक्षमहरुले रजाइँ गरेर ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई बेलाबेलामा धानेकै छन् । कुनै देशको नागरिक भएपछि त्यहाँको पद्धति अनुसार भोट हाल्नु सामान्य कुरा हो । उनीहरुले नागरिकता लिँदा नेपाली मन र नेपालीपन बेच्ने प्रतीज्ञा पत्रमा पनि सही गरेका छैनन् ।
अमेरिकामा साठी हजार भू.पू. नेपालीले भोट हाले भनेर मिथ्याङ्क सुनेको भरमा सम्पूर्ण प्रवाशी नेपालीलाई गाली गर्नुको के अर्थ हुन्छ । नेपालको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने तपाईं र तपाईंका पार्टीले विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना गरोस् सबै नेपाली स्वदेश फिर्नेछन् ।
अहिले सङ्घीयताका नाममा देशलाई विभाजनमा आउने सम्भावना बढेको छ । यसबाट बचाउन लालबाबुहरु किन सत्याग्रह गर्न सक्दैनन् । मधेसमा रहेको गरिबी, अन्धविश्वास र अराजकता विरुद्ध लालबाबुहरु बोल्न सक्दैनन् ?
अतः अहिले देशका समस्या भनेका युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पसेका नेपाली होइनन्, पसिना बेच्न अरब उड्ने नेपाली पनि हैनन् । समस्या त बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार हो । देशमा न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासम्म पूरा गर्न नसक्ने सरकारले युवालाई अन्धकारमा राख्ने, हनुमान बनाएर टायर मात्र बाल्न प्रयोग गर्ने तर विदेशिए, भोट हाले भनेर सत्तोश्रापको सट्टा देशमा अवसरको सिर्जना गर्न बोल्ने गरौँ, अहिले पनि उचित लगानीको वातावरण भए हजारौँ नेपालीहरु नेपाल फर्कन्छन ।
लाल बाबुहरुले के बुझ्नै पर्छ भने देशद्रोही अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा भोट हाल्ने नेपाली भू.पू. नेपाली होइनन् । बरु राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरु हुन् । प्रवासीहरु पनि आफू जन्मे हुर्केको देशलाई धेरै माया गर्छन् । देशमा रोजगारीका लागि राम्रो वातावरण बन्यो भने फर्किन्छन् । त्यसैले चिढ्याउनुभन्दा मन छुने भाषा प्रयोग गरे राम्रो हुनेथियो । अङ्ग अङ्गमा दुखेको देशमा उमङ्ग ल्याउन लाल बाबुजीले गम्भीर भएर मनन गर्ने दिन आएको छ ।